Became - Anglais - Birman Traduction et exemples
Vous avez cherché: became (Anglais - Birman)
ပညာရှိယောင်ဆောင်လျက်နှင့် လူမိုက်အရာ၌ တည်ကြသည် ဖြစ်၍၊
သင်တို့သည် အပြစ်တရား၏ လက်မှလွတ်ကြပြီဖြစ်၍၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၏ ကျွန်ဖြစ်ကြ၏။
လူစောင့်တို့သည် ကောင်းကင်တမန်ကို ကြောက်ရွံ့သဖြင့် တုန်လှုပ်၍ သေမတတ်ဖြစ်ကြ၏။
ထိုသူတို့သည် အင်္ဒေါရအရပ်၌ ဆုံးရှုံး၍၊ မြေ ပေါ်မှာ နောက်ချေးကဲ့သို့ ဖြစ်ကြပါ၏။
လျှော်တေအဝတ်ကို ဝတ်သောအခါ၊ သူတို့သည် သရော်တတ်ကြပါ၏။
လောတ၏ မယားမူကား နောက်သို့ လှည့်ကြည့် ၍ ဆားတိုင်ဖြစ်လေ၏။
malaysiakini reported that #stop114a becameatrending topic worldwide on twitter.
မလေးဆီကာနီက တွစ်တာပေါ်တွင် #stop114a သည် ရေပန်းအစားဆုံး အကြောင်းအရာထဲတွင် ပါဝင်လာကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့သည်။
ထိုသို့ယောသံသည် မိမိဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားရှေ့တော်၌ မိမိအကျင့်တို့ကို ပြင်ဆင်သောကြောင့် တန်ခိုးတိုးပွါးသတည်း။
i went throughaphase where i became obsessed with my mother’s killers.
ကျွန်ုပ်၏ မိခင်အား သတ်သောသူများကို စိတ်စွဲနေသော အဆင့်ကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရ၏။
အကျွန်ုပ်သည်လည်း သူတပါးတို့ ကဲ့ရဲ့စရာ အကြောင်းဖြစ်၍၊ သူတို့သည် အကျွန်ုပ်ကို မြင်သော အခါ၊ ခေါင်းညှိတ်ခြင်းကို ပြုကြပါ၏။
the report became big news on pakistan's mainstream media five days later on august 22.
အကြမ်းဖက်လူအုပ်သည် တရားစီရင်ရေးကို ၄င်းတို့ကသာ ဆောင်ရွက်လိုစိတ် အထင်အရှားရှိနေသည်။
ထိုသို့စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမှ၊ ယုံကြည်နားထောင်သော သူအပေါင်းတို့အား ထာဝရကယ်တင်ခြင်း ကျေးဇူးကို ပြုသောသူဖြစ်တော်မူ၍။
သူသည်ကြီးပွါး၍၊ အလွန်စည်းစိမ်းကြီးသည် တိုင်အောင် တိုးတက်လျက်၊ စီးပွါးဥစ္စာများပြားစွာ ဖြစ်လေ၏။
ဆပ်ပြာနှင့် ရေတို့ဖြင့် လက်ဆေးခြင်းနှင့်ယှဉ်လျှင် ကသိကအောက်ဖြစ်စေသော ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်သည့် အရေပြားရောင်အန်းနာ ဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးခြင်းက စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာပါသည်။
ထိုသို့ ပြောဆိုပြီးမှ၊ ငါသည် ဦးညွတ်သည် ပြပ်ဝပ်၍ စကားမပြောနိုင်ပဲနေ၏။
ထိုလုလင်ဘက်၌လည်း၊ ဘုရားသခင် ရှိတော် မူ၏။ သူသည် ကြီးပွား၍ တော၌နေသဖြင့်၊ လေးသမား ဖြစ်လေ၏။
ပြစ်မှားစရာအကြောင်းကို ပြုလေ၏။ ပြည်သားတို့သည် နွားသငယ်ကို ကိုးကွယ်ခြင်းငှါ၊ ဒန်မြို့တိုင်အောင် သွားတတ်ကြ၏။
gomawo chinguya (Coréen>Anglais)فیلم سوپر انگلیسی (Perse>Italien)mamingatia (Maori>Espéranto)script sa pagmeeting (Tagalog>Anglais)zwquerydirectoryfile (Russe>Anglais)og havd han synes verden skulle ændre (Danois>Anglais)wąż (Polonais>Arabe)phendla (Xhosa>Anglais)off course (Anglais>Tagalog)va oui ca toi? merci pas mal et (Français>Anglais)dictum acerbum (Latin>Russe)ब्लू पिक्चर वीडियो (Anglais>Italien)bretten (Hindi>Anglais)meriliikennepalvelujen (Finnois>Tchèque)hindi naman ako tinatamad mag overtime (Tagalog>Anglais)family first and forever (Anglais>Italien)onr thousand (Anglais>Espagnol)in larvam (Latin>Anglais)nuvarande (Danois>Français)debt deal (Anglais>Espagnol)aprire la serata (Italien>Anglais)poupette (Français>Italien)i ve fallen in love many times always with you (Anglais>Hindi)one bath towel (Anglais>Maori)ísland (Espagnol>Anglais)